K: ဇင်ဘာဘွေ နဲ့ မူဂါဘေ
ဇင်ဘာဘွေ နဲ့ မူဂါဘေ
ဇင်ဘာဘွေ က... ငါးသိန်း တန် နဲ့ ခုနစ်သိန်း ငါးသောင်းတန် ငွေစက္ကူ တွေ ထုတ်ဝေ လိုက်ပါ သတဲ့။
တသန်းတန် လည်း ထုတ်ဖို့ ရှိတယ်..လာမယ် တဲ့။ ဒုက္ခပဲနော်။ ငွေဖောင်းပွ မူ က.. ဟိုက်ပါ လို့သုံးရအောင် ကို အလွန့်အကျွံ ဖြစ်နေ ပါပြီ။ ရာခိုင် နှုံး တသိန်း ကျော် ပြီတဲ့။ ဘုရား ရေ..။ ကိုယ်တို့ထက် တောင် ဆိုးနေပါရောလား။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ သက်တမ်း အကြာဆုံး အာဏာရှင် ကြီး တယောက် ဖြစ်တဲ့ ရောဘတ် မူဂါဘီ ကတော့.. မျောက်မျက်နှာ ရှေ့ ထားလို့.. ခပ်တည်တည်ပါပဲ။ အမယ်..သူက..သတ္တိတော့ရှိသား။ ကုလ သမဂ္ဂ ..နယူးယောက် ထိ တောင်လာပြီး.. စကားတွေ ဘာတွေ ပြောလို့။ ပြည်သူတွေ ရှေ့လည်း..ခဏခဏ တော့ ထွက်သား။ ဘာတွေ ပြောလည်း တော့ မသိ။ သူ့နောက်မှာ တော့..အ၀တ် ဆိုင်းဘုတ်ကြီး တွေ ထောင် လို့... Mugabe is right ! တဲ့။ ခပ်တည်တည်ပဲ။
ကိုယ်တို့ မြို့လေး မှာလည်း..ဒီ နှစ် ထဲ ..ဇင်ဘာဘွေသား တွေ..တဖွဲ ဖွဲ ရောက်လာ နေကြတယ်။ မိုင်း မြို့ ဆိုတော့..တက္ကနစ်ရှန် တွေ အများ ကြီး ခေါ် တာကိုး။ တက်နေ ကျ..ဘုရားကျောင်း လေး မှာ ဆို..တပတ် လောက် မသွား လိုက်နဲ့။ နောက်တပတ် ဆို.. ဇင်ဘာဘွေ မိသားစု မျက်နှာသစ် တွေ ရောက်လာ ပြန် ပြီ။ ထုံးစံအတိုင်း..သူတို့က..သီချင်းဆိုလဲ..အားရ ပါးရ။ ဘုရား ဆုတောင်းလည်း.. အသည်းအသန်။ ခုန်လိုက်..အော်လိုက်.. လဲကျလိုက်..။ နောက် နှစ်လောက် ဆို..အော်စီ တ၀က်..ဇင်ဘာဘွေ တ၀က်တောင် ဖြစ်တော့မယ် ထင်တယ်။ အေရှန် ဆိုလို့ ကိုယ်တို့ပဲ ရှိတယ်။
ထုံးစံအတိုင်း..ကိုယ်ကတော့..စကား စပ်ရင်.. နိုင်ငံရေးလေး တွေ ဘာလေးတွေ..မေးတတ် တော့..ဘိုးတော်က သတိပေးတယ်။ နင်ကလည်း..ဇင်ဘာဘွေ က ထွက် လာတိုင်း.. အာဏာရှင် ဆန့်ကျင်ရေးသမား လို့ ထင်မနေနဲ့.. သတိ ထား ပြော ဆိုလို့..နောက်ပိုင်း ကြည့်ကျက် မေး ရတယ်။ ကိုယ့်နဲ့ အရမ်း ခင်တဲ့..ဆေးရုံ က..သူနာပြု ဆရာမ တယောက် ကတော့.. ပြောရတာ ကီးကိုက် တယ်။ သူ့ အဖေ က.. သူငယ်ငယ်ထဲက..အိမ်က ပါသွား ပြီး..ပြန်ရောက်မလာ တော့ဘူးတဲ့။ လူတွေမှာ..စားစရာ မရှိ လောက်အောင်ကို ဒုက္ခရောက် နေကြတယ် တဲ့။ သတင်း တွေမှာ လည်း တွေ့မိ တယ်။ ဈေးဆိုင် တွေ က..စင်တွေပေါ်မှာ ပြောင်တလင်းခါ နေတာပဲ။ နေ့စဉ် နေ့တိုင်း..နယ်စပ်မျဉ်း ကို ကျော် ပြီး.. အိမ်နီးချင်း တောင်အာဖရိက ထဲကို ခိုးဝင် နေတဲ့ သတင်းဗီဒီယို တွေ ဆို.. မတွေ့ချင် မှ အဆုံး။
တခါ..ကြည့် လိုက် မိတာ.. သတင်းထောက်က.. အဲဒီ လူတွေနဲ့ အတူကို..လိုက် ခိုးဝင် ပြီး.. တလျှောက်လုံး..မှတ်တမ်းတင်ထားတာ။ လူ တွေက..နယ်စပ် သံဆူးကြိုးကျော် တာနဲ့..ဖုတ်ဖတ်ခါ ပြီး ပြေး ကြတော့တာပဲ။ ဘာမှ မပါဘူး..။ အ၀တ်တထည် ကိုယ်တခုနဲ့..အနီးအပါးက..ရွာ အလည်သွားတဲ့ အတိုင်း။ ဟိုဖက် တောင်အာဖရိက..နယ်စပ် ရဲ တွေ နဲ့ တိုး တော့လည်း..သွားလေးတွေ အကျဲသား နဲ့..ဇက်ကလေး တွေပု ပြီး ပါသွား ပြန်တာပဲ။ ချက် ချင်း..သူတို့ကို..ရထားတွဲ ကြီး နဲ့.. ပြန်ပို့။ အော်..သူတို့က.. ယိုးဒယားတွေ..ဗမာ သွန်သလို...နယ်စပ် မျဉ်း ကျော် ရုံလေး သွားသွန် တာ မဟုတ်ဘူးနော်။ ချက်ခြင်း ပြန် တက် လာဖို့ မလွယ် အောင်..ဟိုး..အတွင်းကျ ကျ မြို့ တခု အထိ ရောက် အောင် ..တကူးတက..လာသွန်တာ။ ညကူး ပြီး ခုတ် ရတဲ့..ရထား ခရီး ဆိုတော့...ငိုအားထက် ရယ်အားသန်.. ညဖက် ရောက် ရင်...ရဲက..အကုန်လုံး ကို.. ခုံတွေ အောက်.မှာ. အပေါ်က..လက်ဂိတ်စင် တွေ ပေါ် မှာ တက်ပြီး..ပုနေ အောင် အိပ်ခိုင်း တာ။ မူကြို ကျောင်းက..ကလေး တွေ.နေ့လည် အိပ်ခိုင်းသလို..။ မျက် လုံးလေး တွေ ..ပေကလပ် ပေကလပ် နဲ့။ တံခါး တွေ အကုန် လိုက်ပိတ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်း ဆိုတော့.. ညဖက် မှောင် မှောင် ထဲ..ခုန်ချ ပြီး..ပြန် ၀င် တတ်ကြလို့တဲ့။ သူတို့ကို..အရေး မယူပေမဲ့.. ဝေးဝေးလံလံ ပြန်ပို့တော့..နောက်တခါ..နယ်စပ် ရောက် အောင်လာဖို့..ခရီးစရိတ် ကုန် ဦး မယ်လေ။ အမယ်..သတင်းထောက်ကလည်း..တညလုံး မအိပ်ပဲ..ခိုးကြောင် ခိုးဝှက် လိုက်ရိုက်တာ.. တချို့ လဲ..ခုန်ချ လွတ်သွား ကြတယ်။ မနက် အလင်းရောင် လာ လို့..တွဲစောင့် ရဲက..လိုက် ရီတော့.. ညက.. ၁၀ ယောက် ပျောက်သွားတယ်တဲ့။ တွဲစောင့်ရဲ လည်း.. မြိုးမြိုး မျက် မျက် လေး တော့..နေ့တွက် စီ သွား မပေ့ါ။
နောက်ဆုံး.. သွန် နေကျ..ဆုံရပ် ကို ရောက်တော့..အားလုံး ဆင်း.. ။ အာဏာပိုင် တချို့က..မှာတမ်းချွေ ပြီး... လူစု ခွဲ ကြတော့.. သတင်းထောက်က.. လျှာထိုးဦးထုပ် နောက်ပြန် ဆောင်းထားတဲ့..အသက် ၂၀ လောက် ကောင်လေး တယောက် ကို ..ဗျူးတယ်။ တောင်အာဖရိက..ထဲကို ပြန်သွားဖို့..အစီအစဉ် ရှိ ပါသေးသလား တဲ့။ ဟိုက.. ရှိပါတယ်တဲ့။
ဘယ်တော့လောက် ပြန်သွားအုံးမလဲ..ဆိုတော့...မနက်ဖြန် တဲ့။ ကဲ..ကောင်းရော။
သူတို့ အခြေ အနေကလည်း..ကိုယ်တွေ ထက် တောင် ဆိုးမလားပဲ။ ဒုက္ခနော်.. အဆိုးပြိုင် နေရ တဲ့..ဘ၀ ရောက် နေပြီ။ ဘာပဲ ပြောပြော.. တခါ တလေ တော့.. တချို့ ဇင်ဘာဘွေ တွေနဲ့..ရှဲ လို့တော့..တယ်ကောင်းနေတာပဲ။ ညနေခင်း တီး နဲ့ မြည်းစရာ တခု ကို ရလို့။
တလောက တော့.. တော်တော်ချမ်းသာ တဲ့..ဗမာ မိတ်ဆွေ တယောက် အိမ်ဝယ်ဖို့..လျှောက်ကြည့်တာ..လိုက်ပို့ရင်း.. ဒေါ်လာ ၆ သိန်းတန် အိမ် တခု ဖွင့်တယ် ဆိုလို့..ရောက်သွားတော့..အမယ်.. ဘုရားကျောင်း က..ဇင်ဘာဘွေ..လင်မယားတတွဲ ကိုသွား တွေ့တယ်။ ဟိုင်း..ဘာညာ နှုတ် ဆက် ပြီး... ဘိုးတော် နဲ့..၂ယောက်သား..ခပ်ကြိတ်ကြိတ်..ဟာသ လုပ် မိလိုက်တယ်။`သူတို့လည်း..မူဂါဘီ ရဲ့ အမျိုးထင်တယ်..´ လို့။
Labels: friends , News , Sarcasms